U rogida Safarkaaga Labaad Socdaal Badeed ⋆ Wararka: Farshaxanka, Safarka, Naqshadda, Teknolojiyadda
Bogga ugu weyn safarka
U Jeedinta Safarkaaga Labaad Socdaal Badda
Su'aalo Weydiin: Ku safridda Hong Kong inta lagu jiro Faafida
10 Fikradaha Taariikhda Aasaasiga ah ee Waxbarista Ugu Fiican
12 Tilmaamood oo Loogu Abaabulo Shandadaha Dhamaystiran
Goobaha ugu Fiican ee Qoysaska ee u dhow Tagaytay, Filibiin [Sawirro leh]
Safarka Fasaxa ee Madaarka Caalamiga ah ee Denver Waa mashquul, laakiin uma mashquulsana sida caadiga ah - Wararka, Cimilada & Ciyaaraha Dhamaan Colorado
Ottawa waxay kordhisay xayiraadaha safarka ee caalamiga ah iyada oo ku saleyneysa khatarta COVID-19
Saynisyahannadu waxay bilaabayaan inay sifiican u fahmaan sida safarka cirku u saameeyo jirka
How to use COVID-19 testing and quarantining to safely travel for the holidays – Marin Independent Journal
Sidee wararka tallaalka 'Covid' ay u shidayaan xamaasad cusub safarka: Toddobaadkiiba Safarka
Miyaad la daahday safarka? Haddii aad waxoogaa yara yara kacday sababtuna tahay saameynta cudurka COVID-19, haddii kale waxaad si fudud u awoodi kartaa inaad hal shey oo cusub ku soo qaaddo mawduuca safarka, waxba ma garaaci karaan inaad safarkaaga ku xiga u beddelato safarka badda. Ka dib oo dhan, way fududahay inaad runtii dareento sidii oday dhaqameed sahamiyayaal ah haddii aad sida ugu badan u isticmaasho biyaha oo dhan.
Qorshaynta safar markab ama kaligiis xeebta waa hab wax ku ool ah oo lagu dedaalo hal shey oo gabi ahaanba ka duwan. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira arimo badan oo la mid ah in la sameeyo haddii aad tahay iyo haddii kale safarka solo haddii kale waxaad soo kaxaysanaysaa kuwa aad jeceshahay oo weheliya.
Haddii aad u baahatid safar doon, Faa'iidooyinka ayaa leh wax badan oo ka mid ah tagista waqti gaabis ah iyo awood u leh inaad ku neefsato hawada gudaheeda, inaad awood u leedahay inaad wareejiso si xor ah qaab aad u malayn kartid baabuur, diyaarin, ama diyaarad. Laakiin, muhiim ahaan uma baahnid inaad ka baxdid biyaha markii aad gaarto goobta fasaxa.
Croatia waa meesha ugu wanaagsan ee lagu safri karo doon
Aynu eegno dhowr dariiqyo wanaagsan oo aad suurta gasho inaad “dhex gasho” qaar ka mid ah adventures badda inta lagu guda jiro safarkaaga xiga, iyo sida adventures-kaan ay faa'iido kuu yeelan karaan.
Isu-duwaha ayaa jira oo isagaa faa'iido u leh caafimaadkaaga!
Hadaad waligaa aragtay filimka Pixar Up!, waxaad ku jirtaa dhammaan itimaalka aad u fiican ee aad u fahamsan tahay taas oo macnaheedu yahay cinwaan hoosaadkan. In kasta oo jilayaasha filimkaasi u qaadan karaan cirka safarkiisa ama safarkiisa, goobta waxay u egtahay isku mid nooc kasta oo gaadiid ah.
In kasta oo booqasho loo tago barta dulucda ama hoyga raaxada ayaa laga yaabaa inaysan walwal lahayn, inaad sameyso hal shay dheeri ah iyo kala duwanaansho ayaa laga yaabaa inay si fiican waxtar ugu yeelatid caafimaadkaaga maskaxda iyo ladnaanta. Safar dalxiis wuxuu kaa saari doonaa howlahaaga caadiga ah iyo aaga aad u qalbi qaboojiso. Natiijo ahaan, waxaad heli kartaa waqti dheeri ah oo aad ku tixgaliso naftaada iyo noloshaada, iyo waxaad dhab ahaantii uga baahan tahay. Waa hab wax ku ool ah oo loo adeegsado dhadhanka fekerkaaga is-fikirka. Haddii aad caruur ku dhalan lahayd, safarka ayaa ku caawinaysa inay indhaha ka saaraan barnaamijyadooda fiidiyowga fiidiyowga ah iyo taleefannada, oo ay khibrad u yeeshaan dhammaan biyaha ay leeyihiin.
Safarka, guud ahaan, waxaa sii dheer oo lala xiriiriyay kor u qaadida wanaagga maskaxda. Hal sahan waxaa lagu fuliyay 485 qaangaar gudaha Mareykanka ah ogaatay in socdaalku uu xiriir la leeyahay kor u kaca:
Keliya banaanka dabiicadu waa hab wax ku ool ah oo loo maro kor u qaad cadhadaada oo ku siiya adkeyn dheeraad ah, marka dhacdada haddii aad qorsheyneyso inaad booqato booqasho waqti kasta, si dhaqso ah, maxaad u dooratid hal shay oo aan caadi aheyn, oo adiga kugula shaqeyn karo xaq u yeelashaha nolosha dhabta ah?
Nolosha burcad badeedda
Hagaag, uma baahnid inaad wax dhacaan oo aad boobaan, hase yeeshee waxaa jira waxyaabo badan oo qulqulatooyin badda ka dhasha oo kaa dhigi kara inaad dareento sida burcad-badeednimo dhab ah oo leh dhammaan khatarta ay quseyso. Mid ka mid ah qaababka ugufiican ee tan loo sameeyo waa in la tago raadinta khasnadda.
Raadinta qarashku waa hab wax ku ool ah oo qoyskaaga oo dhan looga hayn karo safarkaaga badda. Taasi waa mid run ah haddii aad go'aansato in biyo-gacmeed raadinta. Taasi waxay ka mid tahay ku sii dhaca biyaha jilbaha. Markaad isticmaal qalabka wax baara oo macdan ah si aad wax u baarto, adiga iyo carruurtaada waxaad ogaan kartaan waxbadan oo kaash ah oo isugu jira lacag caddaan ah iyo dahab, waana caadi in la qodo.
Haddii aad raadineyso khasnad dheeraad ah oo daran, waxaad u baahan tahay inaad ugu yaraan lix ft oo biyo ah, meesha aad ka heli karto arrimaha sida:
Dahab iyo dheeman
Badhamada dharka ciidamada
Ka iibinta calaamadaha
Waxay kuxirantahay meesha aad aado, fursadaha ayaa runtii ah kuwo aan lagaran karin mowduuca waxa aad kaheli karto!
Hadaad ubaahantahay inaad waqti badan gasho inaad runtii sahamiso badaha laftooda, tixgaliso inaad gasho suuqa dalxiiska biyaha hoostooda, iyo inaad qaadato safar hoosaad. Waxay noqon karaan kuwo qaali ah, oo ka bilaabaya $ 800 dhawr dalxiis oo aan qaali ahayn. Laakiin, goortaad aqoon u leedahay badweynta dunidan oo waliba aad ubaahantahay khibrad is dhexgalka, runtii waa safar ka duwan kuwa kale.
Xagee Ugu Faa'iiday Safarkaaga
Badaha ayaa ka kooban ilaa 70% dabaqa dhulka, and for as a lot as we learn about them, there may be nonetheless a lot that’s left to be explored. So, how will you make sure you’re visiting the absolute best locations for unforgettable adventures? The prospects are actually countless, however having somewhat steering doesn’t harm.
Meelaha ugu waaweyn ee leh jaangooyooyin badda dhexdeeda runtii waxay kuxirantahay waxa aad kujirto. isqarxin (iyo jig jigyada!) ama xeebta Maderia. Haddii aad reerka isku keento oo aad u baahan tahay inaad khibrad u hesho hal shay oo qofkasta raalli ka noqon karo, u dalxiis markab Lagos Si aad u aragto dolphins ku dabaalanaya wareega deegaankooda saafi. Waa aragti aan dhab ahaantii sinaba hore u marin doonin.
Hadaad ubaahantahay inaad nasasho ka qaadatid 'adventuring' oo aad ka liidato dadka aad wada shaqeysaan ama reerka, biyuhu waa meesha ugu wanaagsan ee lagu sameyn karo. Tixgeli safarka markab ee Ibiza galabta xasilloon ee qorraxda oo qof walba uu ka heli karo raalli.
Sida ugu macquulsan ee aad arki karto, safarka runtii waa suuqa. Adiga ayaa kuu diyaar ah badda dhexdeeda iyo xeebta agteeda, sidaa darteed tixgeli inaad safarkaaga ku xiga ka dhigto mid aan la ilaawi karin adigoo ka dhigaya xusuus ku saabsan biyaha.
article PreviousBest UK Beach Breaks & Holidays
Next articleMassachusetts wuxuu qeexayaa ka reebitaanka safarka cusub ee Rhode Islanders
American Murder: Netflix true-crime film uses all real footage, to chilling...